Ụgbọ mmiri inflatable na -ekpu n'akụkụ agwaetiti Canary, mmadụ 52 nwụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ụgbọ mmiri inflatable na -ekpu n'akụkụ agwaetiti Canary, mmadụ 52 nwụrụ
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • News • Safety • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Naanị otu onye lanarịrị na ọdachi ụgbọ mmiri dị na Afrịka nke dị nso n'agwaetiti Spain.
Ụgbọ mmiri ndị mba ọzọ na -ekpu n'agwaetiti Canary.
A na -ebuga onye naanị ya nwụrụ gaa ụlọ ọgwụ.
Ihe karịrị mmadụ 50 na -atụ egwu ịnwụ.
Dị ka ụlọ ọrụ nnapụta ụgbọ mmiri nke Spain si kwuo, ihe karịrị mmadụ 50 na -atụ egwu ịnwụ mgbe ụgbọ mmiri na -efe efe si Africa kpuru n'Oké Osimiri Atlantic ihe dị ka kilomita 135 site na Spanish Canary Islands.
Otu nwanyị dị afọ 30 bụ naanị onye a zọpụtara na Tọzdee n'ụgbọ mmiri na-ekpu ekpu, nke hapụrụ Afrịka n'izu gara aga buru ndị njem 53 na ndị gbara ọsọ ndụ.
Ụgbọ mmiri ndị ahịa ahụla mbụ ụgbọ ahụ na ndịda ndịda ya Canary Islands ma mee ka ndị ọrụ mberede Spain mara.
Nwanyị ahụ na -ejidesi aka ike n'ọdụ ụgbọ mmiri ya na nwoke nwụrụ anwụ na nwanyị nwụrụ anwụ n'akụkụ ya, onye ọrụ enyemaka kwuru.
Ọ gwara ndị nnapụta na ụgbọ mmiri a na -awụfu mmiri si n'ụsọ osimiri Sahara Western na ndị njem ahụ si Ivory Coast.
E bugara nwanyị ahụ n'ụlọ ọgwụ na Las Palmas, n'agwaetiti Gran Canaria.
Ọnwụ ndị mbịarambịa na ndị gbara ọsọ ndụ na -adịkarị na mpaghara Atlantic nke kewara West Coast nke Afrịka na Agwaetiti Canary nke Spain mana ụgbọ mmiri na -aga n'ụzọ siri ike ịchọpụta, na ahụghị ọtụtụ ozu ndị ahụ.
Dịkarịa ala, mmadụ 250 nwụrụ ka ha na -aga agwaetiti Spain na ọnwa isii mbụ nke 2021, dịka ụlọ ọrụ na -ahụ maka Mbugharị nke United Nations si kwuo.